Ukuphupha ngeCrazy Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Igama elihlanyayo lithetha ukuphambana okanye ukuphambana. Oku kuchaza isenzo sobundlobongela, esijolise kubo bonke abo bakhoyo. Umpu ngokubanzi usebenzisa imipu okanye izixhobo zokuhlaba, apho owona monakalo mkhulu unokubangelwa.
Igama eliphambeneyo livela kwelaseMalay kwaye lafakwa kulwimi lwaseYurophu ukusukela kwinkulungwane yeshumi elinesixhenxe. Kwindawo yenkcubeko yaseIndonesia, amajoni azama ukuphembelela idabi lawo ngokuwahlasela ngokungaboniyo kubachasi bawo engakhathalelanga bomi bawo. Namhlanje isetyenziselwa ukuchaza ubuntu okanye ukungaziphathi kakuhle. Ngokweziphumo zakutshanje, isenzo sokuziphatha kakubi asenziwanga ngokungxama, kodwa sicwangciswa kwangethuba. Ukudubula okunje kwenzeka kwizikolo ezahlukileyo zaseJamani kuhlala kothusa uluntu ngokubanzi. Kungenxa yokuba amaxhoba phantse ngalo lonke ixesha awanakuzikhusela, amsulwa kwaye kwindawo ekhuselekileyo.
Ukuba umntu uphupha ukuba umntu uyaphambana, ngokuqinisekileyo iya kubangela uloyiko kunye nokothuka. Ngokuqinisekileyo iphupha liziva lingenakuzinceda kwaye lizama ukuzibeka yena kunye nabanye abantu kukhuseleko ngokunjalo. Ukutolikwa kwamaphupha kuthatha isigqibo sokuba ingaba iphupha liyazibona kwindima yexhoba okanye yomenzi wobubi.
1 Uphawu lwephupha «Amok» - Ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Amok» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «Amok» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Amok» - Ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa kwamaphupha, iphupha elinogonyamelo lihlala lingumqondiso wenye. imvukelo yangaphakathi ngokuchasene neemeko zangaphandle. Isimboli yamaphupha "Amok", kwelinye icala, inokubonelela ngolwazi malunga nendawo yobomi apho iingxaki zilele khona, kwelinye icala, ngowuphi umntu okwangoku onobunzima. Ukuba kwenzeka ntoni ephupheni ekhaya, umphuphi kufuneka ajonge ngokunzulu imeko yakhe yabucala. Ukongeza, udlala indima ebalulekileyo ekutolikeni amaphupha, nokuba liphupha eli liphambeneyo kuye okanye komnye umntu.
Ukuba umntu uphupha ukuba naye uyoyika, isimboli yamaphupha "aphambeneyo" kwingcaciso yephupha ingabonisa ukuba iphupha elo linobunzima kwelo phupha. Ukusonjululwa kwembambano Ngaba. Kwimeko apho kukho impikiswano, unokuba notyekelo lokuyenza mandundu imeko ngokugqitha. Kwitoliki yamaphupha, nangona kunjalo, impikiswano inokuthetha ukuba umntu akanako ukuziqinisekisa kwaye izinto zoxinzelelo zamkelwa ngaphandle kokuchaswa. Ngokukodwa, ukuba umenzi wobubi ephupheni ngumntu ongaziwayo ongenakumiswa, uphawu "oluphambeneyo" lwamaphupha lubonisa ukuba iphupha likholelwa ekubeni yena ngokwakhe akanakuba nefuthe kwimeko yobomi bakhe.
Uphawu lwephupha «Amok» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwimbono yengqondo, uphawu "oluphambeneyo" ekuphupheni kwamaphupha luphawu lobundlongondlongo olucinezelweyo njengoloyiko olufihliweyo. Ukuba nguwe unobangela wobundlobongela, iphupha linokwenzeka lokuba i-subconscious yahlule inxenye yobuntu bakho kwaye uyibone njengomntu ozimeleyo. Kwisimboli yamaphupha "Amok" iinxalenye zezinto zibonakalisiwe ukuba iphupha alisekho phantsi kolawulo kwaye loyike. Ukuba uzibona ephupheni ulixhoba lomntu ophethe umpu, oku luphawu lokuchazwa kwephupha. Ukungaqiniseki ngengqondo kunye noloyiko, olunzima kakhulu kumaphupha. Uziva ungenamandla kwaye ungenamandla. Ngokubanzi, isenzo sobundlobongela njengoko kuchaziwe kwisimboli yamaphupha "aphambeneyo", ekutolikweni kwephupha luphawu luphela. Ukuphela indawo yobomi bamaphupha. Unokoyika ukuphulukana nokuthemba kwakho okusisiseko okanye unxibelelwano nabanye.
Uphawu lwephupha «Amok» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha "Amok" lubandakanya ukutolikwa kwengqondo kunye nokujolisa kwamaphupha kwinqanaba lokomoya. intshabalalo. Ukuphupha ngokunokwenzeka uziva kokungekho sikweni kwindawo yengqondo ekufuneka icacisiwe.